Dɛn Nti na Onyankopɔn Ma Amanehunu Ho Kwan? - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
8 Sɛnea yesusuw ho wɔ Ti 3 no, ade a ɛto so abien nti a amanehunu pii wɔ hɔ no ne sɛ, efi bere a atuatew bae wɔ Eden turom hɔ no, adesamma atɔ sin na wɔayɛ abɔnefo. Nnipa abɔnefo taa pere hwehwɛ tumidi, na eyi de akodi, nhyɛso, ne amanehunu ba. (Ɔsɛnkafo 4:1; 8:9) Ade a ɛto so abiɛsa a ɛde amanehunu ba ne “ɛbere ne asiane.” (Ɔsɛnkafo 9:11, NW ) Wɔ wiase a ɛnyɛ Yehowa na ɔyɛ Sodifo a ɔbɔ nkurɔfo ho ban mu no, nnipa betumi ahu amane efisɛ wotumi hyia akwanhyia bere biara.
11 Adam ne Hawa tew atua tiaa Yehowa. Nea na wɔkyerɛ ankasa ni: “Yenhia Yehowa sɛ yɛn Sodifo. Yɛn ankasa betumi asisi papa ne bɔne ho gyinae.” Ná Yehowa bɛyɛ dɛn asiesie saa asɛm yi? Ná ɔbɛyɛ dɛn ama abɔde a wonim nyansa nyinaa ahu sɛ atuatewfo no adi mfomso, na nea ɔno Yehowa ka no mmom na ɛyɛ nokware ankasa? Obi betumi aka sɛ na anka ɛsɛ sɛ Onyankopɔn sɛe atuatewfo no na ɔsan bɔ nnipa foforo. Nanso, na Yehowa aka sɛ ɔde Adam ne Hawa asefo mmom na ɛbɛhyɛ asase so ma, na na ɔpɛ sɛ wɔtra asase so paradise mu. (Genesis 1:28) Yehowa ma biribiara a ɔka bam bere nyinaa. (Yesaia 55:10, 11) Afei nso, na atuatewfo no a obekum wɔn afi Eden no remma wonnya hokwan a Yehowa wɔ sɛ odi tumi ho asɛm a asɔre no ho mmuae.
14 Ɔkyerɛkyerɛfo a yɛaka ne ho asɛm wɔ mfatoho yi mu no nim sɛ otuatewfo no ne sukuufo a wɔakɔka ne ho no adi mfomso. Na onim nso sɛ, sɛ ɔma kwan ma wɔkyerɛkyerɛ wɔn asɛm mu a, ɛso bɛba sukuufo a aka no nyinaa mfaso. Sɛ otuatewfo no antumi ankyerɛkyerɛ nneɛma mu yiye a, sukuufo a wɔbrɛ wɔn ho ase no nyinaa behu sɛ ɔkyerɛkyerɛfo no nkutoo ne obi a ɔfata sɛ ɔkyerɛ adesuakuw no ade. Wɔbɛte nea enti a ɛno akyi no ɔkyerɛkyerɛfo no pam atuatewfo biara fi adesuakuw no mu no ase. Saa ara na Yehowa nim sɛ nnipa ne abɔfo anokwafo nyinaa benya mfaso bere a wobehu sɛ Satan ne ne mfɛfo atuatewfo no adi nkogu, na nnipa ntumi nni wɔn ho so no. Te sɛ Yeremia a ɔtraa ase tete no, wobehu nokwasɛm a ɛho hia yi: “[Yehowa, NW ], mahu sɛ onipa kwan nni ne nsam, enni ɔbarima nsam, sɛnea ɔnam a obetutu n’anammɔn.”—Yeremia 10:23.
Yehowa bɛma ne Ba, Mesia Ahenni no Sodifo no, de nnipa amanehunu nyinaa, ne nea afi amanehunu no mu aba no aba awiei. —1 Yohane 3:8.